people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र १८ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च ३१ तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र १८ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च ३१ तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र १८ गते शुक्रबार,तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च ३१ तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७३ साल चैत्र १८ गते शुक्रबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च ३१ तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी, चन्द्रमा मेष राशिमा १६:०० बजे सम्म पश्चात बृष राशिमा सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे ) मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
खर्च बढ्ने योग रहेकोले सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ कुराकाट्ने ब्यँितहरु को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्ला । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ ।
आय आम्दानि क्षेत्रमा बिशेष राम्रो समय रहेको छ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । सजग रहनु होला
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा मिल्ने छ । मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । साधारण खर्च हुन सक्छ ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला तथा सामान्य चोट पटकको योग रहेको छ । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झट पर्न सक्छ । सामान्य खर्चको योग रहेको छ ।
प्रेम सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ समय मध्यम रहेको छ ।
पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ ।